Urgicalwa Ahụ Light, Tablewa Isiokwu, Medical Pendant - Wanyu
Karịa ngwaahịa 60
Onye na-enye ọla edo: 13
Ihe e kwuru na ya
LEDD500 / 700 N'uko LE ...
Okwu Mmalite LEDD500 / 700 na-ezo aka okpukpu abụọ dome LED ụlọ ọgwụ. A na-eji alloy alloy mee ụlọ ụlọ ọgwụ ahụike ụlọ ọgwụ nwere nnukwu efere aluminom n'ime, nke na-enye aka maka ikpo ọkụ ọkụ. Bulb bụ bọlbụ OSRAM, odo na ọcha. Igwe ihuenyo LCD nwere ike ịhazigharị ọkụ, ogo agba na CRI, ha niile nwere ike idozi na ọkwa iri. Ogwe aka na-agbagharị na-agbaso ogwe aka aluminom dị arọ maka nhazi ziri ezi. Enwere nhọrọ atọ maka oge opupu ihe ubi, ...
LEDD620620 N'uko ikanam ...
Okwu Mmalite LEDD620 / 620 na-ezo aka okpukpu abụọ nke ụlọ elu na-arụ ọrụ ọkụ ọkụ. Ngwaahịa ọhụrụ, nke emegoro na ndabere nke ngwaahịa mbụ. Aluminom alloy shei, kwalite esịtidem Ọdịdị, mma okpomọkụ dissipation mmetụta. 7 modulu oriọna, ngụkọta nke bọlbụ 72, agba abụọ nke odo na ọcha, ogo OSRAM dị elu, agba ọkụ 3500-5000K agba agba, CRI dị elu karịa 90, ọkụ nwere ike iru 150,000 Lux. Ogwe ọrụ bụ LCD ihuenyo mmetụ, ọkụ, agba ...
LEDD730740 N'uko ikanam ...
Okwu Mmalite LEDD730740 na-ezo aka okpukpu abụọ nke ụdị petal ịwa ahụ. Maka ime ụlọ ọrụ na igbe na-eme ka ọ dị ọcha, ụdị petal ahụ nwere ike izere igbochi ikuku na-ebelata ma belata oke ọgba aghara na ikuku laminar. LEDD730740 ọkụ ịwa ahụ ahụike abụọ na-enye ihe ọkụkụ kachasị nke 150,000lux na agba agba agba nke 5000K na max CRI nke 95. A na-agbanwe usoro niile na ọkwa iri na LCD ihuenyo mmetụ njikwa. Enwere aka nke ihe ohuru, nguzogide ...
LEDD500 / 700C + M N'uko ...
Okwu Mmalite LEDD500700C + M na-ezo aka na dome ọkụ abụọ na-arụ ọrụ ọkụ. Wuru na-igwefoto usoro na mpụga nghọta ileba anya nwere ike iji maka ọzụzụ nzube. Ọ na-enyere nlekota na ndekọ arụmọrụ. Tinye na ịwa ahụ abdominal / general ■ gynecology ■ obi / vaskụla / ịwa ahụ ịwa ahụ neurosurgery ■ orthopedics ■ traumatology / mberede OR ro urology / TURP ■ ent / Ophthalmology ■ endoscopy Angiography Feature 1. Igwefoto Igwefuru n'ime igwefoto, ekwesighi ikwusi ya na ndi ozo ...
TS Manual haịdrọlik Su ...
Okwu Mmalite TS haịdrọlik ịwa ahụ table bụ sui ...
Okwu Mmalite TDY-1 electric operating table ado ...
TDY-Y-1 Multi-nzube ...
Okwu Mmalite TDY-Y-1electric hydraulic operatin ...
Okwu Mmalite FD-G-2 vasatail obstetric table i ...
TS-D-100 Ugboro abụọ Electr ...
Okwu Mmalite TS-D-100 na-ezo aka na ogwe aka abụọ ...
TS-DQ-100 Ugboro abụọ Ogwe aka E ...
Okwu Mmalite TS-DQ-100 na-ezo aka aka abụọ ele ...
Okwu Mmalite QF-JX-300 na-ezo aka ICU ọgwụ br ...
TD-TS-100 Factory Dị ...
Okwu Mmalite TD-TS-100 na-ezo aka na ọgwụ ...
Enweghi ike itinye ọkụ na-arụ ọrụ n'uko ụlọ na OR Ime ụlọ nwere Ogologo Ala Dị Ala?
Ọtụtụ afọ ahịa na mmepụta ahụmahụ, anyị achọpụtala na ụfọdụ ndị na-azụ ahịa nwere mgbagwoju anya mgbe ha na-azụta ọkụ na-arụ ọrụ. Maka ọkụ na-arụ ọrụ n'uko ụlọ, ogo ya kachasị mma bụ mita 2.9. Ma na Japan, Thailand, Ecuador, ma ọ bụ ụfọdụ ...
Usoro Ntugharị Belated maka Light Operating
Mgbe ndị ahịa si mba ọzọ na-asị na m azụtabeghị ọkụ ọrụ gị, ọ bụ nke a pụrụ ịtụkwasị obi? Ma ọ bụ ị nọrọ m n’ebe dị anya. Kedu ihe m ga - eme ma ọ bụrụ na enwere nsogbu? Ahịa niile, n'oge a, ga-agwa gị na ngwaahịa anyị kacha mma. Ma ì kwere ha n'ezie? Dị ka professio ...